အသက် ၁၉ နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများစွာစွာရရှိပြီးနောက်၊ သင်ဟာသင့် ဦး နှောက်ပေါ်ကအသားတင်ပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်
အသက် ၁၉ နှစ် - အကျိုးကျေးဇူးများစွာစွာရရှိပြီးနောက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုပြန်လည်ကူးယူပြန်သည်
အဘယ်သူမျှမ fap ၏အချိန်ကြာမြင့်စွာ lurker ။ အခုကျွန်တော်အသက် ၁၉ နှစ်သာရှိသေးသည်။ ငါအချိန်ကာလကအင်တာနက်တစ်ခုလုံးမှာထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးဂရုစိုက်တတ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကိုကူညီဖို့အချိန်တန်ပြီလို့ထင်တယ်။ သင်တို့တွင်အချို့သောသူများသည်ကျွန်ုပ်၏ပုံပြင်နှင့်အတွေ့အကြုံမှရရှိသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ခက်ခဲသောအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်မည်သည့်အရာသည်အတုမရှိခြင်းနှင့်သင်၏ဘ ၀ ကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေခြင်းစသည်တို့အတွက်အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အဲဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ အထက်တန်းကျောင်းနောက်ဆုံးနှစ်ပတ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာနောက်ဆုံးအပန်းဖြေစခန်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဤအရာမတိုင်မီကျွန်ုပ်၏ fapping အစီအစဉ်သည်တပတ်အတွင်းတစ်နေ့လျှင် ၂ ကြိမ်နှင့် (တနင်္ဂနွေ) ရက်များ၌ ၇ ကြိမ်မှ ၈ ကြိမ်အထိဆယ်ကျော်သက်အရွယ် (၁၃-၁၄) ကာလကတည်းကအတော်လေးတည်ငြိမ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယနှစ်အတန်းအထက်တန်းကျောင်းသည်ယခင်ကကျွန်ုပ်၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို ၉၀% အသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် porn ကို fap သို့စတင်ကြည့်ရှုသောအခါ (ကျွန်ုပ်သည် porn porn ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအသုံးပြုခဲ့သည်) ။ တစ်ခါတလေ၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်နေမကောင်းဖြစ်လျှင်၊ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပေါ်တွင်တစ်နေ့လျှင် ၆-၇ ကြိမ်အထိအွန်လိုင်းအရက်သေစာသောက်စားခြင်း၊
ငါ့ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတာကိုအတိအကျမမှတ်မိဘူး၊ ဒါပေမဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာဆောင်းပါးတွေနဲ့သက်သေခံချက်တွေကိုကျွန်တော်စဖတ်ခဲ့တယ် www.yourbrainonporn.com (သင် subreddit ထက်အနည်းငယ်ပို "သိပ္ပံနည်းကျ" ဖြစ်သည့်အံ့ source စရာအရင်းအမြစ်မရှိသေးပါကစစ်ဆေးပါ။ ) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါထိန်းချုပ်မှုမရှိသောကျွန်ုပ်၏စိုးရိမ်စိတ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏နွေရာသီအလေးချိန်နှင့်ခံနိုင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်စေရန်အတွက်၎င်းအားပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လေ့ကျင့်ရေး။ ပထမခုနစ်ရက်သည်အရူးဖြစ်၏ (ဇွန် ၂၀၁၃) ။ ဤစာဖတ်ခြင်းအများစုသည်စိတ်ပျက်အားလျော့ခြင်း၊ မရေမတွက်နိုင်သောတွန်းအားများနှင့်သူရဲကောင်းပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ဖြင့်ပထမဆုံးခုနစ်ရက်၏ပြင်းထန်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမောင်းနှင်မှုကိုခံစားခဲ့ရကြောင်းငါသိ၏။
အဲဒီနောက်နှစ်ပတ်လောက်နေမကောင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဤအဆင့်တွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်အလွန်အစွမ်းထက်သည့်အဆင့်၌ပင်အဆင့်နိမ့်တုပ်ကွေးရောဂါလက္ခဏာများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ဟူသောအတွေးကိုကျွန်တော်နားမလည်နိုင်ခဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်တုပ်ကွေးလိုခံစားခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာသိသိသာသာပိုပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ခဲ့သည် (သို့သော်ဤရွေ့ကား FLU SYMPTOMS - မြင့်မားသောအပူချိန်, ပင်ပန်းစေသော, လည်ချောင်းနာခြင်းစသည်တို့ကိုသတိရပါ - ငါ့ကိုအပျော့စားအဖြစ်ဖော်ပြသော်လည်းသတိပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသော) ငါ ၁၅ ရက် (ဆုတ်ယုတ်မှုမရှိသောနေ့ ၂၂ ပတ်ခန့်) သည် ၁၅ ရက်နေ့တွင်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ရောဂါအတွက်စစ်ဆေးမှုခံယူရန်အလေးအနက်စဉ်းစားမိသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထုတ်ယူမျှ FAP ၏တတိယရက်သတ္တပတ်များကအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ဒီနရောမှာငါအစဉ်အမြဲငါ, ငါ၏အသက်တာ၏အတိတ်သုံးနှစ်အတွင်းခံစားခဲ့ရဖူးအကြီးမြတ်ဆုံးခံစားရတယ်။ တဖန်ငါအထက်တန်းကျောင်းငါ၏ပထမနှစ်နှစ်တွင်ခဲ့တူသောစိတ်ပိုင်း, ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းငါခံစားရတယ်။ (ဇွန်လနှောင်းပိုင်းကနေဇူလိုင်လအစောပိုင်းတွင်မှ) နောကျနှစ်ပတ်အတွင်းအဘို့အရာရာကိုကြောက်မက်ဘွယ်သွားလေ၏။ ငါ၏အလေ့ကျင့်ရေး, ဖတ်ရှုဖို့လှုံ့ဆျောမှု, ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှင့်စိတ်ဓါတ်များသာမကအလွန်ကောင်းသောပေမယ့်အလွန်တည်ငြိမ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ထိုအခါငါမှားယွင်းစွာ Edge မှစတင်ခဲ့သည်။
မိုဘိုင်းနည်းပညာသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ရုပ်ပုံများအပေါ်စွဲလမ်းမှုကိုအရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါအထက်တန်းကျောင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှတဆင့်တစ်ဝက်မရောက်မှီတိုင်အောင်ငါ့အညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြု။ , နောက်ပိုင်းတွင်ငါ၏အ fapping, တိုးမြှင့်မတိုင်မီငါပြောခဲ့လိုပဲ ငါဒီအချိန်မှာစမတ်ဖုန်းရလို့ဒါဟာလုံးဝနီးပါးပါပဲ။ ငါလိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာလိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါလိုချင်တဲ့ဘယ် porn မဆိုမကြည့်နိုင်ဘူး။
စမ်းသပ်မှု ၄ နှင့် ၅ ပတ်အတွင်းကျွန်ုပ်၏ဖုန်းပေါ်တွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစကြည့်သည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စိတ်နေစိတ်ထားသိသိသာသာကျဆင်းခြင်းနှင့် (စိတ်မသက်မသာဖြစ်သော်လည်း) စိုးရိမ်စိတ်များတိုးလာခြင်းကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမှာငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းငါဆုံးသွားတာကအမှားကပြန်ဖြစ်သွားတယ်။ နေ့တိုင်းငါ့ရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းဓလေ့ထုံးစံကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှမပြန်ခဲ့ပေမယ့်တစ်ရက်မှာ ၂ ကြိမ်လောက် PMO နဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ခွဲခြားပြီး“ သန့်ရှင်း” နိုင်သည့်ရက်တွေရှိခဲ့တယ်။ ငါကောလိပ်နှောင်းပိုင်းသြဂုတ်လသို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ဤသည်နွေရာသီ၏ကျန်ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ငါ၏အကောလိပ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ပထမ ဦး ဆုံးစာသင်ဘို့ငါ PMO'ed တစ်ပတ်ကို 4-5 ကြိမ်ဖြစ်ကောင်း။ အရင်တုန်းကထက်နိမ့်ကျနေတုန်းမှာပဲငါကအလုပ်၏ဖိစီးမှုကိုလျော်ကြေးပေးရန်လုံးဝလုပ်နေခဲ့သည်။ ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဖိစီးမှုအတွက်ဘာမျှမလုပ်ခဲ့ဘဲ (စာသားအတိုင်း) ၂၅x ပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ငါစိတ်ကျရောဂါနှင့်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုသို့အောက်သို့နှေးနှေးပေမယ့်တည်ငြိမ်လိမ်စတင်ခဲ့သည်။ ဒီကိစ္စကိုကြားနေရသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရှိအဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂလိကတက္ကသိုလ်တွင် ၃.၆ ရရှိခဲ့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ရည်မှန်းချက်ကင်းမဲ့မှုနှင့်ကျွန်ုပ်သည်“ ဂရုမစိုက်ဘဲသင်ယူခြင်း” ဟုမှတ်ယူလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာငါစာသင်ခန်းသို့သွားသော်လည်းစာသားများကိုမီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်၊ ညမတိုင်မီလေ့လာပြီးထွက်ခွာခဲ့ပြီး youtube တွင်ဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်းအားအချိန်ဖြုန်းခဲ့သည်။ ငါအတန်းနှင့်အတူပျော်ရွှင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမယ့်ငါ့ဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့အရမ်းမပျော်ဘူး။ ငါ fap လုပ်မှသာလျှင်ကောင်းသောအဆင့်သည်ငြိမ်းချမ်းမှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုရောက်လိမ့်မည်။ ငါကွင်းကွင်း၌ငါကုန်ကျစရိတ်နေရာ, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အဖြစ်မှန်အတွက်ငြိမ်းချမ်းမှု, ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အောင်မြင်မှုကောင်းသောအဆင့် (ပညာရေးအနည်းဆုံးငါ့အဘို့) နှင့်အတူလက်ချင်းယှဉ်ခရီးသွားလာ။
ခြောက်ရက်ပတ်လုံးကြာသောကျွန်ုပ်၏ဆောင်းရာသီအားလပ်ရက်တွင် (သင်၏သနားခြင်း၊ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမုသာစကားအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တွေ့မြင်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်၏မနာလိုမှုမပါ ၀ င်ပါ) ကျွန်ုပ်သည်“ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အပြောင်းအလဲအများဆုံးရက်ပေါင်း ၈၀” ကိုစတင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောခြောက်လမှခုနစ်ပတ်အတွင်းအချိန်မရွေးအစားကျွန်ုပ်၏ညစ်ညမ်းသောပြproblemနာကိုထိုအချိန်တွင်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုနားလည်စေသည့်အရာသည်ကျွန်ုပ်ထက်ကျော်လွန်နေပါသည်။ ငါသိတဲ့အတိုင်းငါစိတ်ဓာတ်ကျမှုကြောင့်ငါစတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ညမှာငါမှန်ထဲမှာကြည့်နေတုန်းကျွန်တော့်ကိုဖွင့်ပြခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဒါကိုငါငြင်းလို့မရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်မဆက်ဆံမှီ (သို့) ကျွန်ုပ်အသက် ၉၉ နှစ်မပြည့်မှီတိုင်အောင်၊ P၊ M သို့မဟုတ် O ကိုမဆုံးဖြတ်ပါ။ (ဤအသက်အရွယ်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အားနည်းနေသောမိမိကိုယ်ကိုချီးကျူးခြင်း၊ ချောက်ကမ်းပါးအစွန်းသို့ ဦး တည်ခြင်း၊ ခုန်ခြင်းနှင့်လေထီးခုန်ခြင်းအားလွတ်မြောက်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်၏အနာဂတ် ၉၉ နှစ်) -old မိမိကိုယ်ကို) အခြေစိုက်စခန်းခုန်သွားပါဘူး။
ဒါကြောင့်လာမယ့် ၇ ပတ်ဟာကျွန်တော့်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးကာလတွေအများကြီးပါ။ ငါအရင်လကကဲ့သို့ပထမလ၏ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်အရူးတွေ့ကြုံခံစားခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ကဒီအချိန်ကတဆင့်အာဏာမှအနည်းငယ်ပိုလွယ်ခဲ့ကြသည်။ တစ်နေ့ ၄၅ လောက် (အချို့ကသင့်လျော်သော“ hump”) ဟုပြောပြီးနောက်တွင်ငါစိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဆင့်အတန်းသို့ပြန်သွားရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်မှတ်မိပြီ ဒါကအလုပ်ကကျွန်မကိုစိတ်ဖိစီးစေတာမဟုတ်ဘူး၊ စိတ်ဖိစီးမှု“ မရရှိဘဲ” နှစ်နာရီသုံးနာရီလောက်လေ့လာသင်ယူနိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ စမ်းသပ်မှုများနှင့်စာစီစာကုံးများကဲ့သို့အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုများသောအခြေအနေများသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဖိစီးမှုကိုအဆင့်အလွန်မြင့်မားစေသည်။ အမြဲတမ်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတစ်ခုမှလေ့လာခြင်း၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်း၊ ကစားခြင်းစသည်တို့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုမဖြစ်စေဘဲစိတ်ဖိစီးမှုကို“ မွှေနှောက်” လိမ့်မည်ဟုကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိပဲသွားခြင်းသည်အနည်းဆုံးပြောရန်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
ကြှနျတေျာ့ခရီးဆုံးအံ့သြစရာအစိတ်အပိုင်းများကိုကျနော်ရရှိခဲ့သည့်လှုံ့ဆျောမှုနှင့်စွမ်းအင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမ FAP မများကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောဆေးလုံး, ဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်အစားအစာအဘယ်သူမျှမသင်ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ,6နံနက်အားကစားရုံသို့ သွား. , လူတန်းစားကိုသွား, မိတ်ဆွေများနှင့်အတူထွက်ဆွဲထား, လေ့လာမှု, ပြီးတော့နေဆဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားရန်အချိန်ရှိသည်: ငါရုတ်တရက် 00 မှာနိုးထနိုင်ခဲ့တယ်။ ငါသည်ငါ့အလုပ်နှင့်ကစားတိုးလာပေမယ့်ကျွန်မရဲ့အခန်းတစ်ခန်းနှင့် PMO ၌ထိုင်မယ်လို့သည့်အခါထက် ပို. သရုပ်ြပသလိုခံစားရတယ်။
စွမ်းအင်နှင့်အတူယုံကြည်မှုအတွက်ကြီးမားတဲ့တိုးတက်မှုရောက်လာတယ်။ ကျွန်မရယ်မောသင့်တယ်နဲ့တူငါပုံမှန်အားခံစားခဲ့ရသည်နှင့်တူငါမျက်စိထဲမှာမိန်းကလေးများကြည့်ရှု (ကျနော်ပထမဦးဆုံးမှာအကြောင်းဖတ်ရသောအခါကျွန်မစိတ်ထင်ရာတစ်ခုခုကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာခဲ့), လက်လှုပ်ခြင်း, ရယ်မောနိုင်ခဲ့တယ်။ လူသစ်အစည်းအဝေးခံထားပျော်စရာဖြစ်လာသည်ထက်။ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နဲ့ငါ့အိပ်ဆောင်၏အပြင်ဘက်စွန့ပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ ငါသည်တရှည်ရှည်ရှည်လျားအချိန်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်လူမှုရေးဖြစ်ခြင်းပျော်မွေ့ခဲ့သည်။
ဒါပမေဲ့အံ့သွစရာကတော့ဒီအချိန်အတောအတွင်းမှာ porn ကငါ့ဘဝကိုဆိုးဆိုးရွားရွားပျက်စီးစေခဲ့တယ်။ ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ရက် ၉၀ သင်္ကေတမှတစ်ပတ်ခန့်ဝေးသွားသည်။ တစ်ပတ်ကြာနားပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တော့အချိန်ဇယားရုတ်တရက်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ငါစိတ်ပျက်မိပြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလွန်ကဲသောမိမိကိုယ်မိမိနှင့်အလွန်ဝေးကွာသောကြောင့်အွန်လိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးဗီဒီယိုအချို့ကိုကြည့်ခြင်းကမနာကျင်နိုင်ပါ။ တစ်ရက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမပါဘဲ fapping ဟာကျန်းမာလာမယ်ဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်လာခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်ငါ goner ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါဖြစ်ကောင်း 90 လာမယ့်အပတ်က PMO'ed ။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကအဲဒါဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်သောလိမ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ၇ ရက်မှ ၈ ရက်ထိ“ ပုံမှန်” သို့ပြန်သွားသည်၊ ဒုတိယက ၃-၄ ရက်လောက်ကြာတယ်။ ထိုနောက်မှငါသည်နက်ဖြန်နေ့၌ထွက်ဆဲရှိသောတွင်းတူးတွင်းတူး၏။
ဧပြီလ 20th ကတည်းကငါ P ကို, M ကများနှင့် O. ၏သန့်ရှင်းသောပါပြီငါတဖြည်းဖြည်းကျန်းမာပြန်မှစတင်ခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်မရှေ့ရှိရာအနီးမျှရှိရာဖြစ်၏။ ဤသည်သို့သော်ငါနှင့်အတူပါအဆင်ပြေကြောင်း, သငျသညျအဘယျကွောငျ့မကြာမီမြင်လိမ့်မည်။ ငါသော်လည်းအပြီးသတ်မီ, ငါအချို့အထောက်အကူဖြစ်စေအကြံပေးချက်များပေး / ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတစ်ခုခုလုပ်ချင်ပါတယ်။
1st: ဤစည်းမျဉ်းအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောသည်နှင့်ငါအလွန်ကောင်းစွာကဒီအသိုင်းအဝိုင်းများကထုတ်ဖော်ပြောဆိုခံရဖို့ကတွေ့ကြပြီ: Edge မ။ သငျသညျ PMO ချင်လျှင် Edge ။ ထိုသို့ရိုးရှင်းတဲ့။ ငါတို့သောစွဲဖြစ်ခြင်း, WE မဆီးတားနိုင်။ ငါ3သို့မဟုတ်4ရက်ပေါင်း edging ထက်မပိုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယ - သင်၏“ နေ့ရက်” ကိုကျော်လွန်ပါ။ အများစုအတွက်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းသည် ၄၅ ံပတ်လည်တွင်ရှိသည်ဟုယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည်“ ငါရုတ်တရက်တိုးတက်မှုကိုရပ်တန့်ပြီးအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းလိုင်းတစ်ခုထဲသို့ဝင်သွားလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း” ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည်။ သင်ပြားချပ်ချပ်ချွတ်ထားခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာခြင်းပြုပြီးသည်နှင့်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ကြိမ်တိုးတက်လာလိမ့်မည်။ ဤအရာသည်မင်း၌မတည်ငြိမ်သောကာလများရှိမည်မဟုတ်ဟုဆိုလိုသည်မဟုတ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံအရသင်သည်တစ်နေ့နေ့တွင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်တစ်နည်းနည်းဖြင့်တိုးတက်လာလိမ့်မည်။ ဒါဟာတိုးတက်မှုအကြောင်းစုံလင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အဘယ်သူမျှမ fap isnt
တတိယအချက် - အဲဒါကမင်းကိုအကျိုးပြုမလားဆိုတာမစိုးရိမ်ပါနဲ့။ အချို့သူတို့သည်သူတို့လိုချင်သော / ကြားရသောရလဒ်များကိုမမြင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားမှုကိုကြားရသည်။ မင်းဒီမှာရှိနေရင်မင်းဒီမှာရှိနေတာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့ကလေးလေးဟာနောက်ဆုံးတော့မင်းရဲ့နာကျင်မှုနဲ့စွဲလမ်းမှုတွေကိုခံရပ်နိုင်ဖို့သတ္တိကိုတွေ့ခဲ့လို့ပါ။ လုံလောက်ပါစေ။ သင်မလုပ်လျှင်၊ မကောင်းသောနေ့သို့မဟုတ်အပတ်တိုင်းသည် PMO အတွက်ဆင်ခြေပေးလိမ့်မည်၊ ဒီဟာကဘယ်တော့မှမရပ်ဘူး။ ရရှိရန်အစဉ်အမြဲရှိပါတယ်။
4th: k9 မဟုတ်သောနောက်ဆုံးအခွင့်အလမ်းကာကွယ်ရေးဖူး။ ဒါဟာတခြားအရာအားလုံးထက်ပျက်ကွက်ခဲ့ပါသည်တဲ့အခါ PMO ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုသည်။ ငါသည်ငါ့ကွန်ပျူတာအားဖြင့်တစ်ဆယ်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းအားလပ်ရက်အပေါ်မှာငါ့ mom, နှင့်ငါ့အစ်ကိုငါ့ကို၏ရုပ်ပုံကိုစောင့်ရှောက်။ ဒါကြောင့်အင်တာနက်စစ်ထုတ် disable လုပ်ဖို့ထက်ဒါဟာသင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကို disable လုပ်ဖို့အများကြီးပိုခက်သည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်မငယ်စဉ်ကလေးဘဝသီချင်းနားထောင်ခြင်းတွေ့ပြီသို့မဟုတ်ရိုးရိုးမှတဆင့်အပန်းဖြေ, စိတ်ခံစားမှုသီချင်းတစ်ခုလုံးကိုသီချင်းပြုပြီးနောက်သင်ကိုယ်တိုင်ကတိပေးဖို့ရှိသည်ပင်လျှင်သင် (ငါဘယ်တော့မှအရာ) PMO ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်လွန်စွာကူညီပေးသည်။
5th: တစ်ပုံစံကိုရှာပါ။ ငါကတစ်ခါတစ်ရံလုပ်ဖို့ကမ္ဘာပေါ်မှာအခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ပါတယ်သိကြပေမယ့်ပါဝင်ပတ်သက်နေပါ။ ဒီတစ်ခါလည်းဒီရိုးရှင်းစွာသင်ဤစွဲအနိုင်ယူသည့်အခါဒါဟာထိုက်တန်ပါလိမ့်မည်ငါ 10 ညနေမတိုင်မီအိပ်ရာသွား7မတိုင်မီနှိုးထပါဝင်သည်
6: ဖြည့်စွက်ကူညီကြဘူး။ အထူးသဖြင့်ပထမလမှာမအိပ်မီမဂ္ဂနီစီယမ် citrate 200-400 mg ကိုသောက်ဖို့ကျွန်တော်အထူးအကြံပြုလိုတယ်။ လူအများစုကအဲဒါကိုမလုံလောက်ဘူး၊ ဒါကစူပါအပန်းဖြေမှုပါ၊ အိပ်ရေးဝဝလွန်စွာကူညီပေးတယ်။ Melatonin ကဲ့သို့သောအခြားအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာအထောက်အကူပြုပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ၎င်းသည်မည်သည့်သဘောဖြင့်စွဲလမ်းပုံမပေါ်ပါ။ သငျသညျကိုစိုးရိမ်လျှင်, အိပ်ရာမတိုင်မီမှောင်မိုက်အရွက်အစိမ်းရောင်၏ကြီးမားသောအသုပ်ကိုစားပါ။ သင်သည်များသောအားဖြင့် ၂၀၀၄ မှ ၄၀၀ မီလီဂရမ်မဂ္ဂနီဆီယမ်ကိုများများစားသုံးပါလိမ့်မည် (သို့သော်သင်၏အစိမ်းရောင်များကိုဖြည့်စွက် boiz နှင့် gurlz ဖြင့်မအစားထိုးပါနှင့်။ ၎င်းတို့ကိုဖြည့်စွက်ဟုခေါ်ပြီးအစားအစာမဟုတ်ပါ။ )
7th: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိထားပါ။ ငါပြန်သွားကြသည်မယ်သောအခါငါအမြဲပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဝေးလက်လှမ်းမမီသို့မဟုတ်ထွက်ရဖို့မျိုးစုံခြေလှမ်းများကြာကြောင်းပိုကောင်းတစ်နေရာရာကနေထားပါ။ သငျသညျငါဒီနွေရာသီမှာကွိုးစားစေခြင်းငှါ all- တစ်ခုခုမှာအင်တာနက်မသုံးပါရန်ရှိပါက။
8th: ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံ! ဤသည်ငါ့ကိုလုပ်ဖို့အဘို့အခက်ခဲဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပြန်ရောက်သွားတယ်နှင့်ပင်ငါမကျင့်သောအခါငါ PMO နှင့်ပျော်ရွှင်တဲ့အခါငါဝမ်းနည်းဖြစ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ပြီးနောက်ယခုနီးပါးတစ်နှစ်ရုန်းကန်ပါပြီ။ သင်သည်အဘယ်သို့ရေရှည်၌မစင်ကြယ်စောင့်ရှောက်မည်သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုကိုရကျိုးနပ်ဖြစ်ကြောင်း သိ. ဖြစ်ပါသည်။
ကောက်ချက်ချရန်, ကိုယ့်ကောလိပ်မှာကြှနျတေျာ့ဒုတိယစာသင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ ငါသေးငါ့အတနျးကိုလက်ခံရရှိကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်သူတို့ကြောင့် req အတွက်တဦးတည်းအနိမ့်တန်း၏နောက်ဆုံးစာသင်ထက်နိမ့်ဖြစ်သွားကြသည်ကိုငါသိ၏။ အတန်းအစား (ကြီးကျယ်သောမဟုတ်သော်လည်း) ။ ငါအခြားသူများထံမှလက်ခံရရှိချီးမွမ်းခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်မှတ်လေ့ရှိတယ်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပေမယ့်ငါပြုသကဲ့သို့သင်အားဖြင့်သင့်တစျခုလုံးကိုဘဝသတ်မှတ်ဘယ်တော့မှသငျ့သညျ။ အဲဒီအစား, ငါသည်ငါ့ဆယ်ကျော်သက်ဘဝ၌မဆိုအခြားအချိန်ထက်ပိုပြီးသူငယ်ချင်းဆရာ, ဆရာမ, စာအုပ်တွေနဲ့အထီးထီးနေခြင်းခံစားသည်ဤနောက်ဆုံးစာသင်နေခဲ့ရသည်။ ငါပြန်သွားကြသည်ကိုဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာကြားမှငါအစိတ်အပိုင်းအတွက်သင်တို့ရှိသမျှကိုကျေးဇူးတင် good- များအတွက် PMO မှပြန်လာနိုင်ပါလိမ့်ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်ဟုယခုသိကြ!
-Buddha "တစ်ခုလုံးကိုစကြဝဠာမှာဘယ်သူ့ကိုမှအဖြစ်တာ, သင့်မေတ္တာနှင့်ချစ်ခင်ထိုက်သည်အတိုင်း, သင်ကသင့်ကိုယ်သင်": တစ်ဦးကကိုးကားကျွန်မထင်ပါတယ်, ဒီအဆုံးသတ်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်
LINK - ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ (ပြားချပ်ချပ်လိုင်း၊ ဆုတ်ခွာခြင်း၊ ထပ်ခါတလဲလဲကြိုးစားခြင်းစသည်တို့ကိုသိလိုသူများအတွက်)